Xuseen Qayaad: “Dowlad-Deegaanka Soomaalida waxaa isu biirsaday Abaar, Shuban Biyood & Colaad. | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Xuseen Qayaad: “Dowlad-Deegaanka Soomaalida waxaa isu biirsaday Abaar, Shuban Biyood & Colaad.
Xuseen Qayaad: “Dowlad-Deegaanka Soomaalida waxaa isu biirsaday Abaar, Shuban Biyood & Colaad.
Xuseen Qayaad Gadiid oo kamid ah Odoyaasha Deegaanka Maaiso ee Gobolka Sitti Dowlad Deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in abaarta ka jirta Deegaannadooda ay u dheertahay xaaladda caafimaad sida Shuban Biyood ka dilaacay Degmooyinka qaar.
Qayaad oo la hadlay BBC-da ayaa sheegay in Geella uu u baqtinayo Abaarta dhulka, halka dadka deegaanka uu ku dhacay isbadal dhanka Caloosha oo qaarkood ay la jiifaan Shuban Biyood sida uu hadalka u dhigay.
“Dadku waa xoolo dhaqato, Geella oo ugu adkeysi dambeeyay ayaa baqtinaya, Ariga & Lo’da horay ayay u dhammaadeen, waxaana deegaanka ka dilaacay Shuban Biyood oo qofka marka uu fuuq-baxo kadib dhimanaya, carruurta, Haweenka uurka leh & waayeelka ayaa ugu daran” ayuu yiri Xuseen Qayaad.
Xuseen ayaa tilmaamay in markii hore colaadda Canfarta saameyn taban ku reebtay Deegaannada Soomaalida kadib markii dilal la xiriira aanooyinka labada Qowmiyadood uu ku dhacay Xadka ay wadaagaan.
Colaadda u dhaxeysa Soomaalida Canfarta ayaa sababtay in labada dhinac ay isu gudbi waayaan, dhibaatooyinka ka dhaca deegaannada halkii ay isaga hayaami lahaayeen waxa ay ka door-bidayaan in ay Dhulkooda joogaan sabab la xiriirta beegsi ay ka baqayaan in lagu sameeyo.
Dowladda Fededaalka Itoobiya ayaa ku mashquulsan Dagaalka Gobolka Dhaca Waqooyiga ee Tigray kadib markii Bishii November 2020 dagaal uu dhexmaray Ciidanka Federaalka oo garabsanaya dalka Eretareeya ee ka go’ay 30-sano kahor & xooggaga TPLF.
Previous articleSheekh Shariif Sheekh Axmed oo fariin u diray Hay’addaha amniga dowladda Soomaaliya
Next articleWiil Soomaali ah oo lagu dilay dalka Canada